प्रतिपक्षलाई गाली गरेर समृद्धि हासिल हुँदैन | www.24nepal.com
प्रतिपक्षलाई गाली गरेर समृद्धि हासिल हुँदैन
काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका नेतासमेत रहेका डा. नारायण खड्का उदयपुर–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सांसद हुनुहुन्छ । २०६४ र २०७० सालको संविधानसभामा पनि निर्वाचित हुनुहुन्थ्यो। योसहित उहाँ जनताबाट निर्वाचित भएको तेस्रोपटक हो। पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहनुभएका खड्का राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षसमेत भइसक्नुभएको छ। उहाँले सरकारको १ सय दिन पनि प्रभावकारी नभएको र ‘हावादारी गफ’ मा मात्र बितेको दाबी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ ः सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम, मंगलबार आउँदै गरेको वार्षिक बजेट, पछिल्लो राजनीतिक अवस्था तथा कांग्रेसको अबको गतिलगायतका विषयमा खड्कासँग नेपाल समाचारपत्रका लागि गंगा बरालले गरेको कुरकानी:
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
झट्ट हेर्दा यो हावादारी गफजस्तो छ । यो योजना अत्यन्तै महत्वाकांक्षी छ । बहकाउमा आएको नीति तथा कार्यक्रम हो भन्दा फरक पर्दैन । विपक्षी दलको सांसद भएकाले सधैं आलोचना गरेर बसिरहनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन म । आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बोलेको होइन मैले, सरकारले राम्रो काम गरेको छैन केवल ऊ अझै पनि विपक्षीलाई गाली गर्नमै सीमित छ । प्रतिपक्षलाई गाली गरेर मात्र आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिँदैन । राम्रो र जनताको पक्षमा काम गरेमा जुनसुकै पार्टीकोे सरकार आलोचनाबाट मुक्त हुन्छ । सरकार हिजोको दिनमा सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने भन्दथ्यो तर आजभोलि त्यसलाई पनि अघि नै ल्याउने भन्दै छ । भयो भने त ठीकै हो । तर अब सधैं गफ मात्र गरेर जनताले पत्याउने छैनन् । जलविद्युत्, कृषि र उर्जाका धेरै कुरा आएका छन् ।त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ चासो देखाइयोस् हाम्रो शुभकामना । सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नभई योजनाहरु सफल हुन सक्दैनन् सरकारले त्यसतर्फ चासो देखाएको छैन ।
सरकारका योजनामा विश्वास लागेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
योजना नै नराम्रा छन् भनेको होइन मैले तर कार्यान्वयनमा चाहिँ समस्या छ । केहीअघि अर्थमन्त्रीले जारी गर्नुभएको श्वेतपत्र पनि अचम्मको छ । सरकारी ढिकुटी रित्तो छ भनेर जुन कुरा गरिएको छ त्यसो हो भने कसरी ती सबै लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ र ? त्यसैले सरकारको कार्ययोजना नै अलमलमा परेको देखिन्छ, एकअर्काबीच तालमेल मिलेको छैन । चालु खर्च गर्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था आए समस्या हुन्छ । गत शुक्रबार मात्र चीन सरकारका प्रवक्ताले २ वामबीच भएको पार्टी एकीकरण राम्रो भएको भनेर एकताको स्वागत गर्नुभएको छ । चीन सरकारले नेपाललाई हरेक ढंगले सघाउने भनेको छ यो राम्रो कुरा हो यसको खुलेर समर्थन गर्छौं । सरकारले सबै देशसँग आत्मीय र घनिष्ठ सम्बन्ध राखेर जानुपर्दछ जसले गर्दा विकासका योजनाहरु अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । सरकारको मानसिकता झै केन्द्रीकृत छ, प्रदेशलाई पनि संघबाट नै सञ्चालन गर्न खोज्ने कुराले समग्र क्षेत्रलाई सबल बनाउन सकिँदैन । स्थानीय तह र प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु सरकारको पनि दायित्व हो । हिजो देखिएका विकृति र विसंगतिको अन्त्य नगरी पुरानै पाराले सरकार र अन्य संयन्त्रहरु चलाउँछु भन्ने सोचाइ गरियो भने त्यो खतरनाक हुन्छ ।
सरकारले मंगलबार बजेट ल्याउँदै छ, सरकारले भनेजस्तो जनताको पक्षमा बजेट आउन सम्भव छ कि छैन ?
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अत्यन्तै फितलो भएकाले त्योभन्दा गतिलो बजेट आउला भन्ने लाग्दैन । त्यस्तैउस्तै उट्पट्याङ आउँछ । केपी शर्मा ओलीजीको सरकारले सबै कुरा गर्ने प्रतिबद्वता देखाएको छ तर भाषणले मात्र जनता खुसी हुन सक्दैनन् । नीति तथा कार्यक्रममा छुटेका योजनालाई बजेटमा समावेश गरे पनि हुन्छ ।
सरकारको १ सय दिनको गतिविधिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
सरकार आफूसँग धेरै संख्या र समर्थन छ भनेर घमण्ड गरिरहेको छ, यसको कुनै अर्थ छैन । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ बढिरहेको छ, जनताले न्याय पाउन सकेका छैनन् । नागरिकमा शान्ति सुरक्षाको अनुभूति हुन सकेको छैन । ३३ किलो सुनमा संलग्न जसलाई पनि कारबाही होस्, मेरो र तेरो भनेर कोही उम्किने वातावरण कतैबाट नहोस् । सरकारले यातायातको सिन्डिकेट तोडँे भनेको छ । अनियमितता गर्ने र अस्थिरता मच्चाउनेलाई पनि कारबाही गर्ने भनेको छ त्यो राम्रो काम हो । अहिले जनताले भाषण र प्रतिवद्वताभन्दा पनि तत्काल देखिने उपलब्धि खोजेकाले सरकार त्यो दिशातिर लागोस् । हिजोका दिनमा सबैजसो दलहरुले जनतालाई झुक्याएकाले अब तत्कालै नदेखिने काममा कसैको विश्वास छैन ।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि कांग्रेस अत्तालियो भन्छन् नि ?
हामीलाई कुनै डर छैन र आत्तिने अवस्था आइसकेको छैन । उनीहरुको एकता दिगो होस् मेरो शुभकामना । तर एकताको शुरुमा नै त्यति राम्रो लक्षण देखापरेको छैन । साँच्चै भन्ने हो भने ओली र प्रचण्डबीच पनि अनेकन कुरामा मतभेद छन्, कार्यकर्ता व्यवस्थापनको चुनौती पनि छ त्यसैले पनि शंका गर्ने ठाउँहरु प्रशस्तै छन् । कांग्रेसले थप मिहनेत गर्नुपर्छ भने पनि समस्या छैन । कांग्रेस त सधैं संघर्षबाट हुर्किएर आएको पार्टी हो । हिजोका दिनमा पनि विपक्षी भएर बसेकै हो, आज बस्नै नहुने भन्ने पनि छैन । कांग्रेसले अलिकति बढी मिहनेत ग¥यो भने भविष्य उज्जवल छ । कांग्रेसप्रति जनताको अगाध आस्था र विश्वास छ अलिकति समस्या के हो भने हामीले ती कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न सकेका छैनौं । केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि समीक्षा गरेका छौं, कांग्रेसको परिणाम थोरै घटेको हो यो स्वीकार्नुपर्छ तर पतनै भयो अब कांग्रेस सकियो भन्ने हल्ला गरेर हिँड्नु राम्रो होइन ।
अब कांग्रेसले के गर्दा पार्टीलाई जीवन्त राख्न सजिलो होला ?
जीवन्त राख्ने भन्ने कुरै होइन, कांग्रेस कहाँ मरेको छ र तर सुधार गरेर जानुपर्ने खाँचो छ । हामीबीच देखिएका आन्तरिक द्वन्द्वलाई घटाउँदै जानुपर्छ । अरु बेला पार्टी एउटै हुने अनि निर्वाचनका बेला आफ्नै पार्टीका साथीहरु पनि विपक्षीजस्तो हुने रोगले कांग्रेसलाई सताएको छ । भोलिका दिनमा आफ्नै कार्यकर्ता र नेताका कारणले निर्वाचनमा हार खाने वातावरणको अन्त्य गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी छ । यो पार्टी र त्यो पार्टी भन्दै मेरो र तेरोका नाममा टिकट वितरण गरिएको पनि सुनियो यस्ता गतिविधिले विपक्षीलाई मात्र फाइदा पुगेको छ । पहिलो तहमा बसेका नेताहरुको जिम्मेवारी बढी हुन्छ हामी पनि त्यसको पछि हुन्छौं । अहिले आन्तरिक संगठन मजबुत बनाएर गाउँ तहसम्म संगठन गर्ने बेला आएको छ ।
संसद्मा कांग्रेसको भूमिका प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासो पनि छ नि ?
अलिकति यस्ता गुनासा आएको हामीले पनि सुनेका छौं । संसद्मा बसेर छलफल गरिरहेका छौं । आफ्नो कुरा राखेका छौं, विपक्षीले जे गर्छ त्यसमा अन्धधुन्द समर्थन जनाएका छैनौं । प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको ‘वेटिङ गभरमेन्ट’ पनि भएकाले हामीले मर्यादा मिचेर केही गलत काम गरेका छैनौं । रेलिङ भाँच्ने, सडकमा ढुंगामुढा गर्ने कांग्रेसको संस्कार छैन त्यसैले सभ्य र भद्र प्रतिपक्षको भूमिका निभाएका छौं ।
प्रकशित मिति : 2018-05-27
सत्तारुढ दलकै स‍ांसदले मागे अर्थमन्त्रीकाे राजीनामा, जनताको माग सम्बोधन गर्न नसकेकाे अाराेप
जनताले तिरेकाे ‘कर’ जनप्रतिनिधिकाे ‘कार’ मा जान्छ !
प्रकाण्ड अपराधी हुन् त्यसैले पक्राउ गरिएको हो : गृहमन्त्री
विप्लव समूहका प्रवक्ता तथा पूर्व मन्त्री विश्वकर्माले ७ करोड चन्दा असुली गरेको अभियोग
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सहभागी भएनन्, संवैधानिक परिषद्को बैठक अनिश्चित
संसदीय समिति सभापतिमा नेताहरूको हानथाप !
प्रचण्डले भने प्रदेश १ को नाम किरात प्रदेश नै हुन्छ
हलेशी मन्दिरको भेटीलाई पारदर्शी बनाउदा पुर्बएमालेको रोईलो
भारतीय माग्नेहरूबाट पर्यटकलाई सास्ती
मग्राती बचाउ अभियानमा सहयोग जुट्दै
उदयपुर जेसिजको सप्ताहव्यापी कार्यक्रम सुरु, पहिलो दिन कार्यालय उद्घाटन
चौदण्डीगढीको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको प्रयास सर्पदंश केन्द्र संगै भिडियो एक्सरे सेवा सुरु
त्रियुगा नगरपालिकाको सहयोगमा जिल्ला अस्पतालमा माईक्रोवायोलोजी कल्चर
खोटाङ राजापानीका दिनेश सुनार गिनिज बुकमा नाम लेखाउदै
कोमल वलीलाई कटाक्षः राष्ट्रिय सभामा झ्वाँक तन्नेरी फेला परुन् !
आजको ऐतिहासिक जीतपछी नेपाली क्रिकेटलाई अबसरै अबसर
कांग्रेस एमालेबाट को को परे उम्मेदबारको सिफारिसमा (हेर्नुहोस नामवली सहित)
नारायण खड्कालाई लक्षित गरी वम विस्फोट
त्रियुगा मिडिया एजेन्सी प्रा.लिबाट संचालित www.24nepal.com एक अनलाईन पत्रिका हो, बदलिदो युग संगै संचारको गति तिव्ररुपमा अघि बढि रहेको यस समयमा छापा, विद्युतीय संचार माध्यम संगै अनलाईन पत्रकारिताको समयको आवश्यक्तालाई बुझेर आम नागरिकका विचमा सूचनाको हक स्थापित गर्नका लागि सुरु भएको एक डिजिटल पत्रिको हो ।
Copyright © 2018-2019 www.24nepal.com